उपचारमा खटिएका १७१६ स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण, ८ को मृत्यु « Khasokhas
उपचारमा खटिएका १७१६ स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण, ८ को मृत्यु
उपचारमा खटिएका १७ सय भन्दा धेरै स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टी भएको छ । कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि अग्रमोर्चामा खट्ने १७ सय भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरुमा संक्रमण देखिएको हो ।
शुक्रबारसम्म चीनमामात्र १७१६ स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण पुष्टी भएको हो । उनीहरुमध्ये ६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । युहानमामात्र ११०२ जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टी भएको छ ।
कोरोना भाइरसको बारेमा सुरुमा खुलासा गर्ने चिकित्सकको मृत्यु
चीनमा घातक कोरोना भाइरस संक्रमणको खुलासा गर्ने युहानका डाक्टरको कोरोना भाइरसकै कारण मृत्यु भइसकेको छ । उनले गत डिसेम्बरमा सार्सजस्तै खतरनाक रोग आउन लागेको भन्दै सर्वसाधारणहरुलाई चेतावनी दिएका थिए ।
ली वेनलियांग नाममा ती डाक्टरलाई सामाजिक भड्वाउमा लागेको र अफवाह फैलाएको आरोपमा प्रहरीले बोलाएर एउटा कागजमा हस्ताक्षर गराएको थियो । कोरोनाभाइरस संक्रमित बिरामीबाट उनमा भाइरसको संक्रमण भएपछि उनी जनवरी १२ मा अस्पताल भर्ना भएका थिए ।
फरबरी १ मा उनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टी भएको थियो ।
महामारीकालागि अमेरिका तयार
रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि अमेरिकी केन्द्रले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आउनसक्ने सबैभन्दा खराब अवस्थाको सामना गर्नका लागि तयारी गरिरहेको छ । सीडीसीका निर्देशक रोबर्ट रेडफिल्डले कोरोनाको भाइरसको संक्रमण यो बर्षभन्दा पछाडिसम्मसमेत जारी रहनसक्ने बताएका छन् ।
अमेरिकामा फैलिनसक्ने कोरोना भाइरसको महामारीका लागि अमेरिकाले तयारी गरेको छ । यो भाइरस अमेरिकामा सामुदायिक भाइरसका रुपमा फैलिनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
शोधकर्ताहरुले कोरोना भाइरसको संक्रमणका लागि भ्याक्सिन निर्माण गर्न एकबर्षभन्दा लामोसमय लाग्ने बताएका छन् । अहिलेसम्म कोरोना भाइरस संक्रमणको औषधी पत्ता लागेको छैन । तर औषधीको मिश्रण गरेर उपचार गरिदै आएको छ ।
अहिलेसम्म अमेरिकाका सातवटाराज्यहरुमा १५ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टी भइसकेको छ । क्यालिफोर्नियामा ८ जनामा, इलिनोयमा २ जनामा, एरिजोना, वासिंटन, मासाचुसेट्स, विसकन्सिन र टेक्सासमा एकएकजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टी भइसकेको छ ।
अहिलेसम्म विश्वमा झण्डै ६५ हजारमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टी भएको छ । अहिलेसम्म कोरोना भाइरस संक्रमणबाट झण्डै १४ सय जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
पब्लिक चार्जका ८ कसी : जसका आधारमा ग्रिनकार्ड वा भिसा दिने नदिने निर्धारण
अमेरिकी सरकारले सोमबारदेखि लागु गरेको पब्लिक चार्जको नयाँ नियमका विभिन्न आयामहरुबारे युएससीआईएसले नीति निर्देशिकामार्फत स्पष्ट
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भारत भ्रमण र सम्झौताको उदेश्य के ?
कविराज विसी/ सोमवार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दुई दिने औपचारिक भ्रमणको क्रममा भारत आइपुगेका छन्
भारतमा हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच झडप १३ जनाको मृत्यु
भारतको राजधानी दिल्लीमा हिंसा भड्किएपछि छिमेकी राज्यहरू उत्तर प्रदेश र हरियाणासँगको सिमानामा निगरानी बढाइएको छ
अमेरिकी वैज्ञानिकको दाबी कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप पत्ता लाग्यो
अमेरिकी बायोटेक फर्म मोडर्नाले कोरोना भाइरसको खोप बनाएर अमेरिकी सरकारका अनुसन्धानकर्ताहरूलाई पठाएको र त्यो खोप
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको सुरक्षामा भारतले खटायो लंगुर !
न्युयोर्कमा ज्यान गुमाएका १० बर्षे बालक श्री पन्थी : एउटा फुल जो फक्रनै पाएनन्
सफलताको कथा : इन्जिनियर बन्ने सपना बोकेर रसिया गएका जीवा बने सफल विजनेशम्यान
अमेरिकी नागरिकता गुम्ने सम्भावना भएको जानकारी दिने फर्ममा परिवर्तन ल्याईदै
न्युयोर्कको क्वीन्समा रहेको टीडी बैंकमा दिनदहाडै डकैती